Kihon-dalana lehibe, nilaza ny tribonaly miaramila Libaney fa tsy heloka bevava ny fahapelahana · Global Voices teny Malagasy
Kihon-dalana lehibe, nilaza ny tribonaly miaramila Libaney fa tsy heloka bevava ny fahapelahana
Saingy mitohy ny tolon'ny LGBTQ+ hahazoany ny zony ao Libanona
MpanoratraElias Abou Jaoude
Voadika ny 13 Avrily 2019 6:12 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, Ελληνικά, Español, Italiano, русский, English
Mpanao hetsi-panoherana milanja sora-baventy fireharehana nandritra ny Diaben'ny vehivavy tao Beirota, Libanona, 10 Martsa 2019. Saripikan'i Beirut By Dyke. Nahazoana alalana.
Tamin'ny 30 martsa 2019, namoaka didy ny tribonaly miaramila Libaney fa tsy heloka bevava ny fahapelahana ary nolaviny ny hitsara ireo olona efatra voampanga tamin'ilay ‘heloka’. Ity fanapahan-kevitra manan-danja ity no tranga voalohany teo amin'ny tribonaly miaramila izay mandà ny hampitovy ny fahapelahana amin'ny heloka bevava, na dia efa nisy tahaka izany aza tao amin'ny fitsarana sivily.
Na dia teo aza ny didim-pitsarana, dia mbola [tsy] nanatsoaka ny vesatra tamin'ireo olona efatra tafiditra tamin'ilay raharaha ny tafika.
Ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana Libaney, manome alalana ny fanenjehana pelaka ny andininy faha-534. Miasa mba hanafoana izany andininy izany ireo mpikatroka sy mpisolovava manohana ny zon'ny LGBTQ+.
Manasazy ny “firaisana mifanohitra amin'ny voajanahary” hatramin'ny herintaona an-tranomaizina ny andininy faha-534. Satria tsy voalaza mazava ny famaritana ny “fahapelahana”, dia maro ireo mpitsara liam-pandrosoana afaka mandray ny lalàna araka izay tiany ary miaro ireo voampanga tamin'ny fihetsika toy izany tahaka ny sodomia.
Pikantsary tamin'ny lahatsoratry ny Fikambanan'ny silamo manam-pahaizana talohan'ny nanesorana azy. Ny lohatenin'ilay lahatsoratra dia “Heloka bevava ny sodomia.” Ao anatin'izany, nangatahana ny fitsarana mba handinika indray ny didim-pitsarana mba hiarovana ireo lehilahy efatra ny fikambanana.
Na dia izany aza, tsy manohana izany fanapahan-kevitra izany ireo manampahefana Libaney sy ny mpitondra fivavahana maro, fa misafidy ny hanenjika sy hanilika ny vahoaka LBGTQ + Libaney. Ohatra, namoaka lahatsoratra tao amin'ny pejiny Facebook ny Ligin'ny Manam-pahaizana Miozolomana (Ulemas) any Liban, milaza fa “heloka bevava ny sodomia.”
Nandrahona ny hiditra an-tsehatra amin'ny hetsi-panoherana ity ligy ity raha atao ny diabem-pireharehana ao Beirota 2017. Natao ihany izany tao anatin'ny endrika voafetra kokoa ary voatery nofoanana tamin'ny taona 2018 taorian'ny fampiantranoana hetsika vitsivitsy.
Mikasa hitondra ny raharaha any amin'ny fitsarana ambony ankehitriny ny tafika mba hiampangana ireo olona efatra tafiditra amin'ity raharaha ity amin'ny “heloka bevava”.
Nanaraka ny didim-pitsarana tany amin'ny fitsarana ambany kokoa tamin'ny volana Jolay 2018 ny ohatra voalohany tamin'ny fitsarana ambony.
Nanafaka lehilahy telo niatrika fiampangana noho ny heloka mifandraika amin'ny fahapelahana ihany koa ny fitsarana ambony iray hafa tamin'ny 14 Novambra 2018. Tao anatin'izany, nampijaliana nandritra ny fisamborana ny iray tamin'ireo olona, Syriana, araka ny fanamarihan'ilay mpitsara tamin'ilay raharaha.
Legal Agenda, fikambanana iray tsy miankina ao Libanona, nanasongadina hoe:
Raha ny mikasika ny didim-pitsarana momba ny fiantraikany lehibe amin'ny fiarovana ny vondrona atao an-jorom-bala, nanapa-kevitra handeha lavitra amin'ny fanitsakitsahana voalaza etsy ambany ny iray tamin'ireo mpikambana [ny Mpitsara Rabih Maalouf].
Nosokajiana lafiny roa ny fandikan-dalàna: Voalohany, manamarina mazava fa tsy azo atao ny manameloka ny fahapelahana; ary ny faharoa, mba hanamafisana fa tokony hofoanana ireo fepetra fanadihadiana mba hifanaraka amin'ny zon'olombelona ny dingana ara-pitsarana momba ny heloka bevava, indrindra ny zo ho fanajana ny fiainana manokana sy ny fiarovana manoloana ny fampijaliana.
Mitohy ny tolona LGBTQ + mankany amin'ny ara-dalàna
Tsy momba ny lalàna ihany ireo sakana atrehin'ny olona LGBTQ + any Libanona. Araka ny tatitra nataon'ny Global Voices, miatrika fanavakavahana ara-tsosialy goavana, fomba fitsaboana lany daty tahaka ilay antsoina hoe fitsaboana fanovana ny olona LGBTQ+, raisina ho endrika fampijaliana ataon'ny ankamaroan'ny matihanina amin'ny fitsaboana ara-pananahana.
Na dia eo aza ny endrika manavakavaka amin'ny fomba fanao toy izany, nitatitra ny Fikambanana Ara-pitsaboana Libaney ho an'ny Fahasalamana ara-pananahana (LebMASH) nandritra ny fihaonambe fahatelo momba ny fahasalamana (fanao isan-taona ) tamin'ny martsa 2019 fa mbola manohy mandà ny fitsaboana ho an'ny olona LGBTQ + ny dokotera Libaney:
Hatramin”izao, misy ireo dokotera, mpanampy mpitsabo sy mpitsabo ara-tsaina mandà tsy hanome fanampiana ara-pitsaboana sy fikarakarana ireo olona avy amin'ny fiarahamonina LGBTQ+, mampihatra fanavakavahana amin'izy ireo.
Voalaza ihany koa fa ny 60% -n'ny dokotera Libaney dia mihevitra fa aretina ny fahapelahana, mifanaraka amin'ny toe-tsaina hita ao amin'ny fiarahamonina manontolo. Araka ny fanadihadiana tamin'ny taona 2015 nataon'ny Gender and Sexuality Resource Center (GSRC) sy ny Arab Foundation for Freedoms and Equality (AFE): “nahatsapa ny 64,6% fa tsy tokony horaisina ho isan'ny fiarahamonina ny pelaka ary ny ankamaroany – 75,9% – dia tsy nanaiky fa mahasoa ny fiarahamonina ny mankatoa ny fahapelahana ho toy ny ara-dalàna ary tena resy lahatra tanteraka tamin'ny fomba fijeriny ny antsasany mahery -51,5%.
Na dia teo aza ireo vato misakana ireo, dia nisy ny fandrosoana sasantsasany teo amin'ny fitovian-jo amin'ny lalàna sy ny fanekena ao amin'ny fiarahamonina. Araka ny voalaza etsy ambony, namoaka didim-pitsarana mitovy ireo mpitsara ao amin'ny fitsarana sivily taloha.
Ankoatra izany, tamin'ny taona 2013, ny Fikambanan'ny Psykiatira ao Libanona no nametraka ny firenena ho firenena Arabo voalohany miampanga ny finoana fa fikorontanana ara-tsaina ny fahapelahana. Saingy nitatitra tamin'ny taona 2014 ny Tondro momba ny Sivana fa: “Ao anatin'ny firenena iray tafalatsaka anaty sekta, mora esorina amin'ny anaran'ny fivavahana ny adihevitra momba ny fahapelahana ary voampanga ho mandrisika fahavetavetana ny fahapelahana”.